Gianluigi Buffon Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts
musha NYAYA DZEEEOPEAN Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhodhi Stopper inonyatsozivikanwa neNicknames; "Gigi, Superman". Our Gianluigi Buffon Childhood Story uye Biography Facts inokuunza zvizere zvezviitiko zvinokosha kubva paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekwanisiro ake asi vashomanana chete vanofunga nezveBB's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Gianluigi "Gigi" Buffon akaberekwa musi we 28th waJanuary 1978, muCarrara, Italy naMaria Stella Buffon (amai) uye Adriano Buffon (baba).
Chigadziro cheItaly chinokanganisa chakaberekerwa mumhuri yakafuma yevatambi vechiItaly. Amai vake, Maria Stella, vakanga vari jira rinoputika uye baba vake, Adriano, ainzi ainzi Italy weightlifter.
Sezvo mwana weimba, Gigi ainakidzwa neukama hwakanaka nevabereki vake, kunyanya mumudzimai wake uyo aive nechinzvimbo chakanaka kumwana wake wokupedzisira. Pasi pane mufananidzo wehuduku bhuku Buffon kuchinjwa nemamu wake pamusi wekuzvarwa kwake.
Little Gianluigi Buffon naamai (Pazuva rake rokuberekwa)
Buffon akaratidza maitiro ake makuru emutambo semucheche, zvose nekuda kwevabereki vake vekutambira.
Pasinei nokuvhiringidzika kwepakutanga pamitambo yepamitambo, mwoyo wake wakaenda nebhokisi. Pazera remakore matanhatu chete, vabereki vaBuffon vakanyora muchechi yebhola yebhola yeCanaletto di La Spezia apo yaive nekutanga kutangira basa rake semuviri.
Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Career Summary
Chokwadi chinotaurirwa. Gigi akabuda semuri pakati uye haana kumbova semuchengetedzi. Izvi ndizvo zvakafanana David De Gea. Nhiyo chifananidzo chemudiki Buffon paakanga ari pakati.
Muduku Buffon seMidhielder
Akaita mutambo wake wokutanga muSan Siro mumakore gumi nemana 10 mumutambo wevamwe vatambi vechidiki vanobva Veneto. Makore maviri gare gare, Buffon akawana chifananidzo chake, mucheri weCameroon Thomas N'Kono, uyo akamboita muCln World Cup.
Nhau yeBhuton Idhori- Thomas N'Kono
Tomasi ndiye aive nebasa rekuchinja kwaBuffon kubva kumudziri kuenda kumugadziri wemagariro. Itaiti yose yeItaly inotambira chikwereti kwaari kuti asangane.
Buffon akaita chikwata chake chekuchengetedza vavariro shure kwevadzidzi vaviri vekutanga vechikwata vakagadzirira kukuvara. Mushure memavhiki maviri ekufadza vateveri, akazova mutambi wekusingaperi uye akasimuka kwete imwe chete, asi vaviri vevarindi vemauto muchechi yake. Akanga ane makore 16 panguva ino.
Mutsva wechidiki muItaly akabudirira zvikuru paParma akauya munguva yake yechina pakambani, apo akabatsira kukunda Coppa Italia uye UEFA Cup. Nenguva iyi yakauya panguva apo boka reParma rairumbidza kuda kwaJuan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Lillian Thuram, naFabio Cannavaro. Mushure memazuva maviri anoshamisa panguva yejena nebhuruu, Buffon akaendeswa kuJuventus kuti anoshamise 50 mamiriyoni emamiriyoni (rekodhi yemurindi panguva iyoyo).
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu hweMhuri
Vakatambi vechiItaly vave vakabhadharwa zvakanaka pamusoro pemakore. Kuva nemamu nababa avo vari kutamba mitambo inorevei kunoreva kureka kubva mumhuri yakapfuma. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Gianluigi Buffon. Pano, tinokupa kunzwisisa kwevabereki vaGigi.
BABA: Baba vaBuffon, Adriano Buffon akanga ari mutoro wekutakura. Akazvarwa musi wa 15th Sep 1945 muLatisana, Italy ne Masocco Giorgio (baba) naPaolini Teresa (amai). Pasi pane mufananidzo wechidiki Adriano.
Baba vaGianluigi Buffon - Adriano Buffon
Achitevera mutambo wake wekushanya, Adriano akashanda semudzidzisi wechikoro cheP.
AMAI: Amai vaGigi, Maria Stella Buffon akanga ari mujadzi wechiruswo uyo aimiririrawo Italy kuve nyika. Akabatana nemurume wake kuzoshanda semudzidzisi wechikoro cheP PE mushure mokunge apedza basa.
Amai Gianluigi Buffon - Stella Maria Buffon
Pasi pane chitubu chemazuva ano chevabereki vemitambo yeGigi, Mr and Mrs Adriano Buffon.
Mazuva ano maziso avabereki vaGianluigi Buffon
VADZIDZISI VAKASIMBA: Gigi ndiye mwanakomana wega wemhuri yake. Guendalina Buffon ndiye hanzvadzi huru kuna Gigi. Akaberekwa mu1973. Pasi pane mufananidzo wake uye munun'una wake wemwana uye muItaly nyika yechigamba 'Gigi'.
Guendalina Buffon nehanzvadzi yake 'Gigi'
Pasi pane mufananidzo weBudon Sista, Veronica Buffon. Akaberekwa mu1975. Veronica Buffon akashandisa volleyball yeboka reItaly renyika yevolleyball.
Gigi's immediate sister sister- Veronica Buffon
UNCLE: Gigi Buffon ane hanzvadzi yainzi Dante Masocco. Akanga ari basketball mutambo muSerie A1, uyo akamirirawo mutambo weItaly wenyika yose.
Murume waGigi Buffon, Dante Masocco
MUZUKURU: Animbova Inter Milan uye Italy nhoroondo yekuchengetedza chinangwa Lorenzo Buffon izukuru wekurukuru waGianluigi Buffon.
Gigi's Buffon's cousin -Lorenzo Buffon
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Gigi akafuma uye akanaka kwazvo. Izvi nokureva zvinoreva kuti pane zvakakosha kuva ukama hwehukama muupenyu hwake hwose. Tirikupa kwamuri, tsanangudzo yehupenyu hwake hwehukama.
Nyaya ye rudo yaGigi Buffon yakadzokera ku2005 paakasangana ndokudanana naAlena Seredova. Alena ndiye aiva mumhanyi wekutanga we Miss Czech Republic mu1998 uye mumiririri wenyika yake pa Miss World 1998.
Gigi Buffon naAlena Seredova
Gigi akaroorwa naAlena Seredova munaJune 16, 2011, muPrague. Vane vana vaviri, Louis Thomas (akaberekerwa 2007) naDavid Lee (vakazvarwa 2009).
Gigi navana vake, Thomas (kurudyi) uye David (kuruboshwe)
Mwana wake wokutanga 'Tomasi' akatumidzwa zita raGigi Buffon chifananidzo chaTimph N'Kono. Anoita nguva yekutamba nevana vose. Izvi zvinonyanya kuitika paanenge achizorora.
Musi waMay 2014, Buffon akazivisa kuti awane kurambana nemudzimai wake. Ivo akaparadzaniswa mushure memakore matatu ekuroorana.
Akakurumidza kufanana nemitambo yeItaly pundit, mutori wenhau uye muterevhizheni Ilaria D'Amico.
Maererano nemagazini muItaly, Buffon naAl Amico ndivo "Sarabhi" uye vavakidzani vave vakatanga kunyunyuta pamusoro pemubvumo wekuita kwavo rudo.
Muna 2015, Buffon akazivisa kuti vaviri vacho vari kutarisira mwana pamwe chete. Pana 6 January 2016, vaviri vacho vakataura kuberekwa kwemwanakomana wavo Leopoldo Mattia pane Twitter kare manheru iwayo.
Muzhizha re2017, vaviri vacho vakazobatana. Asati aine ukama uye akaroorwa naTereová, Buffon akanga atovimbiswa kune sprinter kubva kuItaly National Athletics team, Vincenza Calì.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -2003 / 2004 Nyaya
Muna 2013, Buffon akaratidzira kuti akanga atambura nematambudziko ekudengenyeka munguva ye 2003-04 season, achitevera Juventus 'kutambiswa kwechikwata muChikwata che 2003 Champions League, uye nekuda kwekusagadzirisa kwaJuventus kwengozi.
Buffon aigara achishanyira chiremba wepfungwa, asi akaramba kutora mishonga, uye akakunda kuora mwoyo kwake vasati vasvika Euro 2004
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Business Wine
Kunge Andrea Pirlo uye Andres Iniesta, Buffon anozivawo girazi rewaini yake sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Kubvira kuna Gigi Buffon kuenda kunaWesley Sneijder, kuna Ivan Zamorano: vanowiri vemauto ebhora nhasi vakaona mazita avo akaputirwa muhombodo yewaini semazere.
Munguva pfupi yapfuura Muna 2017, Buffon akatanga mutambo wake wewaini pasi pezita rokuti "Buffon #1".
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Shamwari kuPapa
Buffon ndiKaturike nekutenda. Ndiye shamwari yakanaka yaPapa Francis. Vose vaviri vaviri vakaungana mu2013 pasi pemuburira webhola nechitendero.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Chimiro cheMutambo uye Kugamuchira
Kubvira pakuuya kwake setarenda yepakutanga muhuduku hwake, Buffon ave akazivikanwa nokuda kwekuita kwake nguva dzose mubasa rake rose. Nhoroondo yacho yakagamuchira kurumbidzwa kubva kumamenari, vatambi, uyewo vose varipo uye vekare vavamwe vavariro yekuchengetedza. Izvi ndezvekudzivirira kwake uye kugadzikana kugadzikana pasi pekumanikidzwa, pamwe chete nebasa rake rekushanda, uye kurarama kwenguva refu.
Anowanzoonekwa kuti ndiye archetype wemuzvidziro wemazuva ano uye ataurwa nevamwe vakawanda vanotevera vavariro vavariro sezvinonyanya kutungamirira uye muenzaniso.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Shirt Number Issue
Paaiva paParma, chisarudzo chaBuffon chokupfeka nhamba ye88 shati, panzvimbo yekambani yake yekare 1 shirt, 2000-01 yegore zvakakonzera kukakavara muItaly.
Buffon, zvisinei, akazviti haana kuziva nhamba dzeNo-Nazi, dzinotaura kuti 88 inomiririra "mabhora mana", ayo ari zviratidzo zveunhu uye unhu hwemunhu. Akataura kuti aireva kuratidza kudikanwa kwake kwezvinhu izvi mushure mekukuvara kwake vasati vasvika Euro 2000 uye kuti ivo vaimiririra "kuzvarwa patsva".
Akazopa kuti achinje nhamba, kusarudza iyo nhamba yemauto 77.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Dambudziko rekutongerwa mujeri
Muna 2000, Buffon akaisa mutongo mujeri kwemakore mana nekuda kwekunyengera dhipatimendi yekudzidzira chikoro chesekondari kuitira kuti anyorese kuchikoro chemutemo paYunivhesiti yeParma.
Akabhadhara 3,500 euro yakanaka mu2001. Iye akazotsanangura chiitiko chacho sechishuvo chake chikuru.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kusabvumiranwa Kwepamberi
Pa 12 May 2006, panguva yakakwirira ye Calciopoli mhosva, Buffon akapomerwa mhosva yekutengesa zviri pamutemo Serie A, iyo yakatanga kuisa muItaly 2006 World Cup squad pangozi.
Buffon akambomubvunzurudzwa uye akabvuma kuisa bets pamitambo yemitambo. Zvaiva nekuda kwake kuti vatambi vematambo vakabvumidzwa kubheti kubva munaOctober 2005. Buffon yakasunungurwa pamhosva dzose muna December 2006.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Football Politics
Pana 7 May 2012, Buffon akasarudzwa vamiririri weItaly Footballers 'Association (AIC). Iyi ndiyo nguva yokutanga mutambi wechirwere akashanda uyu.
Gore iroro, Buffon akabatanidzwa "Remekedza Kusiyana" Purogiramu, kuburikidza neEFA, iyo yakaronga kurwisana nekusarura, rusarura uye kusawirirana mubhodhi.
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Progidy yake
Gianluigi Buffon akafanotaurira ramangwana rakanaka rinotarisana nemukuru wevanhu Gianluigi Donnarumma ane zita rakafanana naro. 'AC Milan muchengeti weDonnarumma angave mwanakomana wangu' - anodaro Gianluigi Buffon.
Ive yakave yakakurumbira yekutsvaga paIndaneti sekuziva kuti muchengeti we AC Milan ane chokuita neBuffon.
Maererano nechechi yeC AC Milan ... "Ndine hukama hwakawanda naGigi. Anogara achindipa mazano uye anondibata sehama yake kunyange iwe iwe tine zita rimwechete uye hatisi ukama. ndine akaedza kutarisa hupenyu hwose hwaanoita mukurovedza uye ndinomuonga nokuda kwegamba kwandiri. Munhu wese anoti ini ndiri mugari wenhaka yaGigi, mwanakomana wake kana mukoma. Pari zvino ndangotarisa kuMilan chete uye ndichiita zvakanaka ipapo, sezvazviri chikwata Ndakatsigira kubvira ndichiri mwana. Ini ndatove pane klabhu yepamusoro. "
Tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, taura nesu!
Italiyano Bhodhi Diary